Imikhosi Yokubungaza ukukhula yamaZulu
Ukuguqulwa kusukela ebuntwaneni kuya ekubeni ngumuntu omdala
Esikhathini esedlule impilo yendabuko yaseZulu yayihlelwe kahle futhi isiyalo sagcizelela zonke izici. Umuntu ngamunye wayenemisebenzi kanye nemisebenzi ethize yokwenza, kuye ngokuthi ubulili, ubudala nobukhulu emakhaya (umuzi). Ukuhlukaniswa phakathi kwamalungu omphakathi kwaqiniswa ngokuthi wonke umuntu wadlula ngezibalo eziningi ezimisiwe, akekho okungafakwa ngaphakathi ngaphandle kokulungiselela kanye nemikhosi.
Isigaba sokuqala ekushintsheni kusukela ebuntwaneni kuze kube yilapho umuntu ekhulile waqokwa umkhosi we-qhumbuza noma wokubhoboza indlebe, okwakudingeka ingane yonke ihambe ngaphambi kokuba ifinyelele. Isigaba esilandelayo empilweni yomuntu ngamunye kwakuwukufinyelela kokuvuthwa ngokomzimba, noma ukukhulelwa. Ezikhathini zakuqala, lokhu kwakuyisikhathi somcimbi obalulekile wokuqala obizwa ngokuthi i-thomba, eyasebenza ngokulinganayo kubafana namantombazane.
Ngesikhathi senqubo yokuqalwa, abafana namantombazane eneminyaka efanayo baqala ukuhlukaniswa okuhlukile, lapho bafundiswa khona ngabafundisi ngezidingo nemisebenzi yabantu abadala. Isikhathi sokuhlukaniswa sasiqedwa ngemuva kokusungulwa kohlelo lwamabutho (ohlelweni lweminyaka yobudala) ngasekupheleni kwekhulu le-18 leminyaka.
Ngemuva komkhosi wamadoda, umfana wayebizwa ngokuthi i-insizwa (insizwa) futhi wayekhululekile ukukhokha amantombazane asebudala bakhe naseqenjini lakhe, kodwa wayengenaso ukushada. Imikhosi emibili eyengeziwe yokudlulela kwakufanele yenziwe ngaphambi kokuthi lokhu kwenzeke.
Owokuqala kwaba ukufakwa kwakhe ku-regiment, noma ibutho, okungabandakanya iminyaka engama-10 yenkonzo yenkosi. Owesibini kwakuwukuthunga kwe-isicoco noma ikhanda-indandatho, ebonisa ukutholakala kwabantu abadala.
Umkhosi Wezinhlanga, ohlose ukugxilisa ukuziqhenya kwabesifazane abasebasha, uye waba umcimbi omkhulu, ohambele amantombazane avela esifundeni sonke saKwaZulu-Natali. Kusukela ngo-1994, lapho i-African National Congress iqala ukubusa, kwenziwa imizamo yokuguqula lo mcimbi ube semicimbi yamasiko amaningi, kodwa lokhu akuzange kuphumelele ngokuphelele.
Abesifazane abasebasha banemikhosi ezayo (umemulo). Kulezi zinsuku, umndeni wesifazane ubulala inkabi lapho ethola khona amafutha ayigqoke ngenkathi edansa izivakashi ezihlangene Lawa mafutha afanekisela ukuvikelwa okhokho bakhe okuyokwenza ukuba abuyele lapho ephuma ekhaya ayoshada futhi ahlale kwenye indlu.